Mini Sandblaster, Sand Blasting Equipment, Blast Machines - Instant Clean
Ibhentshi phezulu sandblast iKhabhinethi ...
Centrifugal Wemigqomo Finishing Machine 30L 60L 80 ...
Hand aphethwe Sandblasting Gun ephathekayo womoya A ...
Anti-ukugqwala Ukuvikelwa Air Sp ...
2021 uhlobo okusha okuzenzakalelayo isigubhu uhlobo sandblasting ...
Okuzenzakalelayo sandblasting mach ...
Elihambayo ibhande okuzenzakalelayo Sand ukuqhumisa Izinsiza kusebenza ...
Amabhande we-Converyor nokuqhumisa ...
Ipulasitiki Mass Qedela Deburring wokucwebezelisa Media
I-Plastic Mass Finishing Debu ...
I-B4C Venturi Boron Carbide Nozzles Coarse Threa ...
Izici ze-th ...
Imishini ye-vibrabtory tumbler enekhava
I-Vibratory tumbler nge-cove ...
Ukwenza ngokwezifiso i-Sand Sand blasting Machine Wheel Blasting
Tungsten Carbide Sandblast umlomo wombhobho High Pressure ...
I-Tungsten Carbide Sandblast ...
Ukuncela uhlobo Sand owomile ukuqhumisa umshini nge Tur ...
Ukuncela uhlobo sandblasti ezomile ...
Isigqoko seSandblast nesihlungi seThempelesha
Isiguquli samandla omoya degreasing f ...
Amanzi nolaka Heavy duty isihlabathi blasting umshini ...
Kusetshenziswe esikalini ...
Umshini Wokumboza Powder we-Electrostatic
Umshini wokufafaza we-Electrostatic ...
Ephathekayo Sandblasting Izibhamu 90psi Sma ashintshekayo ...
Imininingwane: Umkhiqizo siz ...
I-Hangzhou Shunjie Machinery Technology Co., Ltd i (Ngaphambili i-Hangzhou Huashengtong Machinery Equipment co., LTD.)
kuyinto ukukhiqizwa professional kanye yokuthengisa ukuqhumisa umshini, wadubula ukuqhumisa umshini, wadubula peening umshini, ukuqhumisa igumbi,
ukuqhumisa ulwelwesi nezinye izinto zokwelapha ebusweni zebhizinisi elizimele, ezisekela ukuthengisa okuqondile kwazo zonke izinhlobo zezingxenye ezingasebenzi, izinto ezilimele kalula;
Ngasikhathi sinye iningi lamakhasimende asekelayo ukuhlinzeka ngemikhiqizo ewuchungechunge esezingeni eliphakeme yasekhaya neyangaphandle.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni angaphezu kweziyishumi nezifunda eziseMpumalanga Ephakathi, e-Australia, eCanada, eRussia, e-Europe nase-United States.
UJunjie ubambelela “kumqondo omusha, ukuphishekela ubuhle, ukuthuthuka okusheshayo, ukuphathwa okusimeme” ifilosofi yebhizinisi; Futhi “ikhwalithi kungumsebenzi wokuqala”, ”
ukwaneliseka kwamakhasimende kuyinhlonipho yethu ”njengenqubomgomo yethu yaphakade yekhwalithi; Ukunakekela imvelo, buyela emphakathini,
ukunakekela abasebenzi kanye nezinye izibopho zomphakathi njengezabo; Ukuthatha "ubuqotho, isibopho, ukuqamba, iqembu" njengokuphishekela kwethu njalo nenhloso, sinethemba lokukunikeza ngemikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme!
Ikakhulu esetshenziswa emikhunjini, isakhiwo sensimbi, iziqukathi, izimoto, izingxenye zezimoto, izikulufo, izesekeli ezahlukahlukene zehadiwe, imabula, uphawu, ukuqoshwa kwamatshe, iwashi, ipulasitiki, ikristalu, ingilazi,
izinto zobumba kanye nejeans ezihaqayo nezinye izimboni, sinokuklama kobuchwepheshe, ukukhiqiza, ukufakwa nokwakhiwa kanye nesevisi ephelele emva kokuthengisa.
Imikhiqizo yochungechunge lweJunjie isidlulile i-ISO-9001: isitifiketi sekhwalithi yamazwe omhlaba ka-2008, futhi sinamalungelo obunikazi angaphezu kwama-40,
imikhiqizo yayo ivumelaniswe nezimakethe zaseYurophu nezaseMelika. Le nkampani inezisebenzi ezinhle kakhulu zobunjiniyela nezobuchwepheshe,
kanye nethimba lonjiniyela abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe, nganoma yisiphi isikhathi nanoma ikuphi ukuhlinzeka abasebenzisi ngezeluleko zobuchwepheshe, umhlahlandlela wokufaka,
ukugcinwa kanye nezinye izinsizakalo. Umshini we-sandblasting, igumbi le-sandblasting lisetshenziswa kakhulu ezimotweni, ezindwangu, ku-fiber yamakhemikhali, emithini, ekudleni,
ukusansimbi, ezempi, imikhiqizo kagesi, imishini, i-Hardware nokuvikelwa kwemvelo nezinye izimboni.
Okuzenzakalelayo Sandblast umshini ukuqhumisa zemabula, ingilazi, ipuleti yensimbi, ipuleti lensimbi
Lolu chungechunge lomshini wendiza yokudlulisela othomathikhi uhlobo lomshini we-sandblasting, isivinini sokuhambisa sitholakala ukuguqulwa kwemvamisa yokulawulwa kwedijithali isivinini se-Sandblasting, ikhwalithi yokucubungula izinzile, ukusebenza okulula. 2. Beka okokusebenza ebhanini elihambayo ngesikhathi sokusebenza, nas sandblasti ...
Unyaka Omusha WamaShayina 2021
Febhuwari / 02/2021
Sizoba neholide elide kusuka ngoFebhuwari 5 kuya ku-18. Ngeke silethe noma yiziphi izimpahla Okwamanje, kepha sisengaphendula i-imeyili ngesikhathi Sifisa ukuthi Amakhasimende ethu Amasha nawadala abe nokuthula.
Amanzi Sandblasting umshini zithunyelwa Australia
Januwari / 19/2021
Insimbi engagqwali Umshini we-sandblasting wamanzi Impompo enhle i-2.5KW, kanye namandla wokwenza ngokwezifiso i-415V Windshield wiper professional sandblasting gun Ihlanganiswe ngePlywooden box
Ingcindezi High Sand ukuqhumisa iKhabhinethi nge ingcindezi imbiza
Ngaphambili Emuva Umshini ocindezelwe we-sandblasting machine o-ode yi-Jiaxing inkampani efakwe ohlwini uhanjisiwe. Umshini wokucindezela u-sandblasting ophakeme wakhiwa isiqoqi sothuli lokucindezela kanye nethangi lengcindezi. Kudingeka ifakwe i-ai ...
Umgomo nokuhlukaniswa kwe-Vibration Grinder (1)
UNov / 21/2020
Icubungula into: Imishini yokugaya i-Vibration isetshenziswa emabhayisikili, izingxenye ze-aluminium die-casting, izingxenye zokuphonsa i-zinc, ifenisha yezinsimbi, okokusebenza kwezingubo, izinsimbi zemithwalo, izesekeli zezibuko, iwashi, izesekeli zokubuka, izingidi, izesekeli zikagesi, zonke izinhlobo zobucwebe, ubucwebe, impuphu ...